नेपाल आज | गाई, विरालो र गणतन्त्र
गाई, विरालो र गणतन्त्र
पारिवारिक जीवन विताइरहेका एक बृद्ध पुरुषलाई वैराग्य लाग्यो । उनले छिमेकी गाउँको घनघोर जंगलमा गएर बाँकी जीवन तपस्यामा बिताउने निधो गरे । सम्पतिका नाममा दुईवटा लगौंटी मात्र साथमा लगेका थिए । नुहाएर एउटा लगौंटी सुकाउँथे । सुकेको लगौंटी भोलि लगाउँथे । एकदिन लगौंटी उठाउन के गएका थिए, देख्छन् त मुसाले काटेर ध्वस्त बनाए छ । लगौंटी जोगाउने उपाय स्वरुप ती नव तपस्वीले विरालो पाल्ने निर्णय गरे । नजिकै गाउँबाट विरालोको बच्चा ल्याए । उनी दिनैपिच्छे गाउँ गएर विरालाका लागि दूध लिएर आउँथे । दूधका लागि धाउँदा, धाउँदा गाउँलेलाई पीडा भएको अनुभव गर्दै विचार गरे– ‘विरालोकै लागि भए पनि एउटा गाई पाल्नु पर्यो ।’ गाई ल्याए ।
गाउँलेहरुले तपस्वी विरामी परेको खण्डमा गौमाताको बिजोग हुने सम्झेर विवाह गर्न दबाब दिए । एकाध दिन त उनले टारे । नभन्दै विरामी परे । गाउँलेको सल्लाह ठीकै जस्तो लाग्यो । एकदिन गाउँलेले खोजिदिएकी एकल महिलासंग उनको विवाह भयो । विवाह गरेको केही वर्षमै सन्तान भए । तपस्वी वृद्ध थिए । एकदिन जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुगे । गाउँलेहरुले घेरेर राखेका थिए । गाउँलेहरुले आग्रह गरे– ‘जीवनको उत्तराद्र्धमा हामीलाई केही दिव्य सन्देश दिएर जानुस् ।’ बृद्ध तपस्वीले अन्तिम सास फेर्नुअघि कानमा सुसाउँदै भने– ‘जीवनमा अरु सवैथोक गर्नु विरालो पाल्ने काम कदापी नगर्नु । विरालोबाट शुरु भएको मेरो लोभ आखिर जुन चीजको मुक्तिका लागि म तपस्याका लागि आएको थिएँ, त्यही दलदलमा फसें ।’
लगौंटीवाल बृद्धले झैं केपी र पीकेले एकदिन कबुल गर्ने दिन आउने छ– ‘बरु प्रतिपक्ष सही तर दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारको मुखिया कहिल्यै बन्न नपरोस् ।’ हेर्दा केपी–पीके प्रालि देशमा सर्वशक्तिमान देखिए पनि नेपालको इतिहासमा यति लाचार सरकार विरलै थियो । दुई तिहाइ वास्तवमा शक्ति नभएर अंक रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ । दुई तिहाईको सतिसालको कथित किलो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको एउटा वक्तव्यले हल्लिन्छ । शेरबहादुर देउवाको तीन मिनेट कटेर चार मिनेट पुग्न नसकेको नबुझिने भाषणले ओलीका उखान तुक्का हिउँ जमे झैं जम्छन् ।
नेपालमा सबैभन्दा सजिलो काम भनेको मन्त्री हुनु हो । जसका लागि कुनै योग्यता चाहिँदैन । यति सजिलो पदलाई समेत न्याय गर्न सक्ने क्षमता क्रान्तिकारीहरुमा देखिएन । दुईचार वटा रातो कितावका पातो र नेताले बोलेका जार्गन कण्ठ गरेर संसारमा भएका सबै राता टालालाई क्रान्तिको प्रतिक देखेर मुठी कस्ने बाहेक उनीहरुमा कुनै योग्यता छैन् । सिक्ने इच्छा राख्नु भनेको क्रान्तिको विसर्जन हो भन्ने बुझाई छ । जीवनमा असफल जेटीए जागिर खाएका जनार्दन शर्मालाई सचिवले बोलेको पच्दैन । जेटीए हुँदा हाकिमले हप्काएको तुस अहिले उनी झार्न चाहन्छन् । सीपका नाममा कुट्ने र काट्ने बाहेक अरु नजानेका मातृका यादवलाई आफू असक्षम भएको भन्न लाज लाग्छ, बरु सचिवलाई दोष देखाएर निर्दोष हुने लाजमर्दो प्रयास गर्छन् । दुईचार बाहेक मन्त्रिपरिषद्का धेरै सदस्यलाई राज्य सञ्चालनको दायित्व नै थाहा छैन् । माओवादीका मन्त्रीलाई सरकार पिकनिक हो । उनीहरु गरिब जनताको आवाजमा आफू धनी हुन चाहन्छन् । सन्तानविहीन केपी ओलीमा नजन्माएका सन्तानलाई आफू बाँच्दै नाना, खाना र छानाको बन्दोबस्त गरिदिने भोक छ ।
चुलोको अर्थशास्त्र कोमामा पुग्न लागेको यो घडीमा सिंहदरबार गाउँ सारेको जस लिने प्रस्पिर्धामा उत्रिएका सरकारका अभियन्ताहरुको अवस्था थाल खाउँ कि भात खाउँ जस्तो छ । जसले जतिसुकै लामो दाम्लो बाटेको दम्भ गरेपनि जब गाँठो पार्ने बेलामा सन्तुलन मिल्दैन भने त्यो तोरणमा अनुवाद हुनपुग्छ । हेक्का रहोस्, जतिसुकै पवित्र भएपनि तोरण गाईबस्तु बाँध्ने काममा उपयोग हुँदैन । आर्थिक समृद्धिका स्थायी अन्तरामा ठूलाबडा मुखियाहरुको अखण्ड प्रवचन चलिरहँदा गरिबमाथि अन्यायका थाक बढ्दा छन् । सबैको कान पवित्र हुने गरी घोषणापत्रमा हल्ला गरेपनि त्यो झूटको पुलिन्दामा सीमित बन्यो । न्यायालय, अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान वैधानिक डकैतीको सुरक्षित स्थल हुनबाट रोक्ने कामको श्रीगणेश गर्ने तागत कसैमा देखिएन । बरु नेताहरु निशस्त्र डन बने ।
पटक पटक गरी नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको लडाईं लडेको सात दशक नाघेको छ । जनताको अधिकार स्थापित गर्ने नाममा भएका ती आन्दोलनपछिको राजनीतिक उपलब्धी संस्थागत गर्न नसक्ने दलहरुको अकर्मण्यताको पीडा अन्तत हजुरबादेखि नातिपुस्ता सम्मले भोग्नुपरेको छ । राणा शासन विरुद्ध विक्रम संवत १९९७ देखि शुरु भएको आन्दोलन २००७, ०१७, ०४६ हुँदै ०६३ को आन्दोलनपछि मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दासम्म पनि जनताका अधिकार स्थापित हुन सकेका छैनन् । २०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘प्रशासन यन्त्रको भ्रष्टाचार एवम् अदालतहरुमा व्यापक रुपमा फैलिएको घुसखोरीबाट जनता पीडित छन् । प्रशासन यन्त्र जनताको भलाई निमित्त हो । थर जनताको शोषण गर्नको निमित्त यसको उपयोग भइरहेको छ । शासन भार लिने वित्तिकै घूसखोरी एवम् भष्टाचारलाई नेपाली काँग्रेसले निर्मूल पार्ने छ । भ्रष्ट कर्मचारीलाई कडा सजाय र इमान्दार एवम् कर्तव्यपरायण कर्मचारीलाई कदर गर्ने नेपाली काँग्रेसको सरकारले प्रतिज्ञा गर्दैछ ।’
आज ६ दशक पछि पनि नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रको सारांस यही व्यहोरासंग मेल खान्छ । काँग्रेसभित्रको गुठीतन्त्र शेरबहादुरका पालामा आउँदासम्म झन्झन् कसिलो बन्दै गएको छ । भाषणमा जतिसुकै बगबग गरेपनि पार्टीका अरु नेता भनेको घरैबाट चटाई बोकेर शेरबहादुरको प्रवचन सुन्ने मात्र हुन् । प्रवचन नबुझे पनि बुझिएन भन्ने आँट उनीहरुमा छैन् । प्रजातन्त्रको प्रतिफल केही टाठाबाठाले लिने गरेपनि सर्वसाधारणका लागि विधिको शासन आकाशको फलजस्तै बनेको छ । जनताले पाएका थोरै अधिकार पनि निगाहको रुपमा परिभाषित हुने गरेका छन् ।
दलहरुले आफू अनुकूलको राज्य व्यवस्था चलाउन नपाएपछि प्रजातन्त्रका विधि विधानलाई सिध्याउने र जनतालाई बलीको बोको बनाउने अभ्यास बारम्बार चल्ने गरेको छ । तीन दशक यताको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आफूले कुर्सी त्याग गर्नुपर्ने भएपछि अधिकांश प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गराउनुको भित्री रहस्य पनि यही हो । आन्दोलनले पुरानो व्यवस्थालाई मिल्काएपछि त्यो व्यवस्थाका सारथीहरु दण्डित हुनुपर्छ । उनीहरु सत्ता सञ्चालनका लागि किन नालायक भए ? त्यो प्रश्नको उत्तर नयाँ आउनेका गतिविधिले दिनुपर्छ । तर परिवर्तन आएको खुसीमा सिन्दुरे जात्रा मनाएर निधारबाट सिन्दुर मेटिएको हुँदैन, अघिल्ला शासकहरुसंगै सहभोज गरिँदा हालसम्म पाएको भनिएका सवै उपलब्धि गिजोलिएका छन् । यसैको परिणाम एउटा आन्दोलनमा जुर्मुराएकाहरु अर्को आन्दोलनका लागि ओइलिने गरेका छन् ।
६ दशकअघि एशियाका नेपाल, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, भियतनामलगायतका जनताको प्रतिव्यक्ति आय हाराहारीजस्तै थियो । तर तिनै छिमेकी मुलुकका जनताको प्रतिव्यक्ति आय हजारौं डलर भइसक्दा नेपाली जनता भने निर्धो अंकमा खुम्चिन बाध्य छन् । प्रजातन्त्रको प्रतिफल जनताको हातमा नपुगेको एउटा कटु सत्यसंगै नयाँपुस्तामा राजनीतिप्रतिको विकर्षण भविष्यका लागि थप घातक सूचक हो । जसका कारण जनताको भाग्य निर्माणको तहमा असक्षम व्यक्तिहरुको पहुँच सुरक्षित बन्ने खतरा देखिन्छ । यसैले युवापुस्तालाई मूलधारको राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय गराउनु वाञ्छनीय छ । एकातिर प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा तीनपुस्ताको समय गुज्रिसकेको छ भने अर्कातिर हजुरबा पुस्ताको समकालिन राजनीतिमा वर्चस्व छ । जुन समयको माग होइन । अघिल्लो पुस्तालाई सम्मान, नयाँपुस्तालाई अवसर अहिलेको आवश्यकता हो ।
राजनीतिमा नैतिक धरातलको सिंढीबाट झरेपछि त्यो व्यक्ति जनताको आँखाबाट कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन । हो, अपवादका रुपमा नियम कानुनको सहारामा कतिपय राजनीतिक व्यक्ति निष्कलंक बनेर देखा परेका छन् । यद्यपी कागजमा सफाई पाएपनि जनताको मन मस्तिष्कमा उनीहरुको छवि कालाको कालै छ । अरुलाई कदर गर्न जानियो भने आफू पनि त्यसको लायक होइने हो । भएको संस्कार पनि मेटाउने, नयाँ पनि थप्न नसक्ने विचित्रको मनोविज्ञानमा राजनीति कुदिरहेको छ । नेपालमा क्षमतावान नेता प्रशस्तै जन्मिए । कतिले सपना देखे, समय पाएनन् । अहिलेकाले समय पाए, सपनै देखेनन् । टंकप्रसाद आचार्य एकताका चीन भ्रमणमा गएका थिए । चीनले उनलाई शान्तिदूतका रुपमा जापान गएर दुई देशबीचको सम्बन्ध सुलह गराइदिन गरेको आग्रहलाई उनले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिदिए ।
१४ भाषाका ज्ञाता मातृका प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि अमेरिकाको राजदूत भएर पद सानो ठूलो हुंदैन भन्ने प्रमाणित गरे । २० वर्ष नपुग्दै भारतका तात्कालिन प्रतिभाशाली राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादको निजी सहायक बने । भनिन्छ– राजेन्द्रप्रसाद दुई हातले एकैपटक दुई विषयमा जांच लेख्न सक्थे रे ! राष्ट्रसंघमा अलिखित भाषण गर्ने मातृका त्यसवेलाका विश्वकै चर्चित वक्ता थिए ।
विना पूर्वाग्रह भन्ने हो भने देशका अधिकांश नेताहरु अदालतका पुराना डिट्ठा, विचारीजस्ता छन् । काइते बोल्नु उनीहरुको राजनीतिक जागिर बन्दै आएको छ । सर्जक उनीहरुलाई मन पर्दैन । सवैलाई थाहा भएकै सत्य हो– ‘जँड्याहालाई मही मन पर्दैन ।’ दासताबाट नउठेको मानसिकताका नेता र ईन्द्रेणी रंगका वुद्धिजीवी भएको देशमा इतिहास कुन बाटोमा हिंड्छ ? भविष्यबाणी गर्न मुस्किल छ । कार्यकर्ता त नेताको इशारामा चल्दैन भने इतिहास कसरी हिंड्छ, कसलाई के थाहा ?
रामायणकालीन इतिहास हेर्ने हो भने पन्छी राज जटायुले मृत्युको अन्तिम स्थितिमा रहंदारहंदै पनि रावणले भिक्षुको भेषमा पुष्पक विमानमा राखेर सीतालाई हरेर लंका लगेको गुप्त खबर रामलाई दिंदा त्यो सूचना नै रामकथाको मूल शूत्र बन्यो । त्यति मात्र होइन रावणलाई नाभी वाण लागेपछि मात्र उसको अन्त्य हुन्छ भन्ने गुह्य रहस्य विभीषणले नखोलिदिएको भए शायद रामको बाण त्यसै निष्फल हुन बेर लाग्ने थिएन । नेतृत्वमा रहेकाहरुले बुझ्नु पर्छ– राज्य सञ्चालनमा सूचना सवैभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ । आज कुनै देश समृद्ध छ भने त्यसको पहिलो कारण हो– सूचनामा पहुँच । सत्तामा बस्नेहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले भनेको एउटा सानो कुरा मनन् गर्नु उचित छ–‘सत्ताको यात्रा भनेको शेरको सवारीजस्तै हो बसिरहँदा पनि गलेर हैरानी, झर्दा आफैं शेरको शिकार हुने भय ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जातीय दासता उन्मूलन गरेवापत संसारमा प्रसिद्ध भए । अमेरिकाको राष्ट्रिय अखण्डतालाई विखण्डन हुनबाट उनले जोगाउँदा लाखौं अमेरिकी मरे । तैपनि उनले दक्षिणी अमेरिकी राज्यलाई छुटिन दिएनन । यसैका लागि श्रीलंकामा ७० हजार नागरिक बलिबेदीमा चढिसकेका छन । भारत र पाकिस्तानबीच बाँडिएको कास्मिरमा सन् १९४९ मा नेहरुले राष्ट्रसंघमा त्यहाँका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार मान्ने भनेर जनमत संग्रह स्वीकारे पनि त्यहाँ मर्ने क्रम रोकिएको छैन । विश्वमा यस्ता मुलुक छन जहाँ सात पुस्ता बस्दा पनि नागरिकता दिइन्न । युएइमा सम्पूण नागरिक मध्ये १५ प्रतिशत मात्र स्थानीय हुन । यी सबै दृश्यले भन्छ– ‘देशलाई चौताराको मादल बनाउनेको भविष्य कदापी सुरक्षित हुँदैन् ।’
घनघोर जंगल योग्यता